यस्तो छ हेलिप्याड ल्याण्ड हुने कार ! - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो छ हेलिप्याड ल्याण्ड हुने कार !
एजेन्सी । लिमोजिन संसारको सबैभन्दा महंगो कारमध्येमा पर्छ । यो कार निकै लामो हुन्छ र यसको डिजाइन उत्कृष्ट होटलको कोठाभन्दा कम हुँदैन ।
यो कार द अमेरीकन ड्रिम संसारको सबैभन्दा लामो लिमोजिन हो । यसलाई अमेरीकाको प्रशिद्ध डिजाइनर जय ओहवर्गले पुनसृजना गरेका हुन् । यो कार करीब १०० मिटर लामो छ र यसमा २६ वटा टायर छ । यसमा हेलिप्याड छ । जहाँ हेलिकप्टर ल्याण्ड हुन सक्छ । यसको भित्र स्वीमिङ पुल र किंग साइज पलङ पनि छ । यस कारको मुल्य करीब ४३ करोड रुपैया बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस हरेक हप्ता बुवा बन्छन् यी व्यक्त्ति, ८ सय बच्चा जन्माइसके
के हो लिमोजिन
लिमोजिन कुनै करा ब्राण्ड होइन । यो कार अर्डर गरेपछि मात्र बनाइन्छ । यसलाई प्रयोगकर्ताको माग अनुसार बनाइन्छ । यो कारको मुख्य विषेशता भनेको ब्रांडको हिसावले नभइ सुविधाको हिसावले यसलाई पुन डिजाइन गरिन्छ । यसमा कार चलाउने व्यत्ति र बस्ने व्यक्ति एउटै कारमा भएपनि छुट्टै छुट्टै हुन्छन्।
ट्याग्स: amazing world